Dominica waxay billowday buugga rasmiga ah ee 'Trail Hiker's Logbook' iyo Baasaboor
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka » Dominica waxay billowday buugga rasmiga ah ee 'Trail Hiker's Logbook' iyo Baasaboor
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dominika • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dominika Waxay leedahay shabakad ballaaran oo waddooyin socod ah oo ku habboon dhammaan danaha iyo heerarka kartida. Waddooyinka badankoodu waxay maraan degaanno dabiici ah oo kala duwan sida kaymaha roobka, jiqda montane ama dhulka alwaaxa ah. Miisaanka iyo kala duwanaanshaha socodka Dominica waxay ka dhigaysaa jasiiradda mid gaar ah Caribbean gobolka.
Si loo dhiirigaliyo booqdayaasha inay lugeeyaan dariiqyada kala duwan ee Dominica, Discover Dominica Authority waxay horumarisay Dominica's Trail Hiker's Logbook iyo Passport. Baasaboorkan socodku waa hab madadaalo leh oo lagu duubo khibradaha socod ee qofka; Tamashlayaasha waxaa lagu abaalmarin doonaa guulahooda, iyadoo lagu salaynayo tirada waddooyinka la mariyey.
Baasaboorada socodku waa lacag la'aan waxaana laga heli karaa Discover Dominica Authority xafiiskeeda ugu weyn ee ku yaala Great Marlborough Street, Qaybta Forestry, xafiiska DHTA iyo xafiisyada macluumaadka dalxiiska ee Roseau Bayfront, Roseau Ferry Terminal iyo Douglas-Charles Airport.
Sababtoo ah socodka Dominica dhamaantood aad bay u kala duwan yihiin waxayna leeyihiin caqabado iyaga u gaar ah, mid walba waxaa la siinayaa dhibco ka dhan ah qaybaha TREAD ee ku qoran baasaboorka socodka. Qiimayntan waxa si fudud loola jeedaa inay yihiin tilmaamayaal si ay u caawiyaan tamashlaha inay sameeyaan doorashooyin socodka; Tilmaamuhu wuxuu bixiyaa faahfaahin ku saabsan heerka dhibka.
Xukuumadda Dominica iyada oo loo marayo Wasaaradda Dalxiiska iyo Dhaqanka ayaa ku maalgelisay dib u soo celinta waddooyinka kala duwan ee socodka, dib-u-dhiska iyo dib-u-habaynta dhismayaasha ku yaal waddooyinka ama meelaha u dhow, si ay u siiyaan khibrado waaweyn booqdayaasha iyo dadka deegaanka si isku mid ah.